We Fight We Win. -- " More than Media ": We Report You decide it ဒေါ်ရင်ရင်နွယ် ( ဦးနေ၀င်းချွေးမဟောင်း )
We Report You decide it ဒေါ်ရင်ရင်နွယ် ( ဦးနေ၀င်းချွေးမဟောင်း )
သူပြောတဲ့အချက်တွေက ဟုတ်သလိုလု်ိရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မဟုတ်ပါ။ အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်တော့
Paradox ပေါခင်ဗျာ။ ပြောတဲ့အချက်တွေက ဟုတ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဖြစ်မလာဘူး။ မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့
မြန်မာနိင်ငံမှာ တိုင်းရင်းသားတွေရော၊ နိင်ငံသားတွေပါ ဘာအခွင့်အရေးမရှိကြပါ။
နိင်ငံသားဖြစ်နိင်သလိုလို သူက ခပ်တတည်တည်နဲ့လှိမ့် လုံး ခြောက်လုံးလုပ်နေပါတယ်။
ဗကသ မှာ ကျောင်းသူ မဖြိုးဖြိုးအောင် ဟာ တတိယ မျိုးဆက်ဖြစ်သော်ငြားလဲ နိင်ငံသားအခွင့်အရေးမ၇ှိပါ။
သူမ မှတ်ပုံတင်ကို လဲလုို့ မရပါ။ တရုပ်ဖြစ်နေလို့ ဟု လူဝင်မှုက အကြောင်းပြပါတယ်။ အလားတူ
နိင်ငံသားအခွင့်အရေးများ ငြင်းပယ်ခံထားရတဲ့ အိန္ဒယနွယ်ဘွားနဲ့တရုပ်နွယ်ဘွားများ အများအပြားရှိနေပါတယ်။ နိင်ငံသားဖြစ် မှတ်ပုံတင်ကို လိုခြင်ပါက ဒေါ်လာ ၃ထောင်ပေးလျင်ချက်ခြင်း
ရပါတယ်။ ( အရေးယူပေးမယ်ဆိုလျင် အချက်အလက်ပေးနိင်ပါတယ်။ )
၁၉ ၈၂ ဥပဒေအတိုင်းဆိုတာ ခပ်တည်တည်နဲ့ ဖြီးလှံးမျှသာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်က လူကုန်ကူးနေတာ
စစ်အုပ်စုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉ ၈၂ ဥပဒေကိုလက်တလုံးခြားလုပ်နေတာသူတို့ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သမိုင်းအမိုက်ခြင်းထဲမှာ သူလဲပါပါတယ်။
၂။ ရခိုင်အပါဝင် တိုင်းရင်းသားတွေမှာ ကို်ယ်ပိုင်ပြဌန်းခွင့်မရှိခဲ့လုို့ဒီလိုလူမှုအနိဌာရုံတွေကို ကြုံတွေရတဲ့
၃။ ရခုိုင်ပြည်နယ်ကို စစ်အစိုးရအုပ်ချုပ်နေသမျှ ရခိုင်-ရိုဟင်ဂျာပြသနာများ ဖြစ်နေဦးမှာဖြစ်တာကို သူမပြောပါ။ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ရခိုင်ပြည်သူများဒီမိုကရေစီနည်းကျကျအုပ်ချုပ်ရလျင် ယခုကဲသို့ဖြစ်တော့မည်ဟုတ်ပါ။
၄။ လူဝင်မှုအရာရှိတွေ လာဘ်စားတာကိုသူပြောတယ်။ အရေးယူဖုို့ သူမပြောပါ။
မွန်စလင်ဘာသာဝင် ၁၀ ဦး အသတ်ခံရတဲ့အကြောင်းကို မပြောပါ။
She isalot better than Daw Su.
When you are in this situation, you will understand what you should say. Don't act like kid. Do you expect commission to make everyone happy? No way.